UNks Tivana Chellan.
Umfundi Wezobudokotela E-UKZN Uqokelwe Kwesobumongameli Omusha We-SAMSA
UNks Tivana Chellan, ongumfundi weziqu zobudokotela e-UKZN Medical School eThekwini, uqokwe ukuthhi abengumengameli omusha ezweni lonke we-South African Medical Students Association (i-SAMSA) wangonyaka wezi-2021.
I-SAMSA iyinhlangano yezwe lonke engenzi nzuzo enezitshudeni zezifundo zobudokotela zasemanyuvesi ehlukene ezweni. Lilonke, lenhlangano ngeyabafundi futhi ilawulwa abafundi bezobudokotela. Amalungu e-SAMSA angamavolontiya kanti anothando lobudokotela nokwenza ushintsho eNingizimu Afrika nasemhlabeni.
U-Chellan, obenguSihlalo weSAMSA KwaZulu-Natali nyakenye, ubenza umsebenzi elwa nokubhebhetheka kwe-COVID-19 ngemikhankaso yezempilo emphakathini yokuhlomisa imiphakathi, ukunqanda izimfundisoze nomkhankaso i-ICARE SAMSA kanjalo ne#MzansiUthuleleni ne-IForYOUth, ehlose ukulwa ngokucwasa ngokobuhlanga nokobolili nokucija intsha.
U-Chellan useke wasebenza kwezempilo zomphakathi.
‘Ngikubheke ngamehlo abomvu ukuqala esikhundleni sami esisha njengomengameli wezwe lonke kanti ngifisa ukuhola abafundi baseNingizimu Afrika nentsha ngezinto ezintsha nokusebenza into ebonakalayo emkhakheni wezempilo yomphakathi ezweni lonke,’ kusho u-Chellan.
Kwethulwe Incwadi Yobhalomagama LwesiZulu
Umfundi WezobuDokotela Unconywe Ngabahloli
Kwethulwe UMsizi Chatbot